Miyaad Garanaysaan Waxaan Ka Hadlayo?
Ninka lagu magacaabi Juxa ayaa maalin tuuladiisu ka codsatay madaama uu yahay nin caqli badan inuu khudbad u jeediyo. Laakiin markii uu minbarka koray ayu weydiiyay : “ Ma garanaysaan waxaan ka hadli doono “? Maya ayay ugu jawabaan. Ka dibna wuu iska soo dhaadhacay isagoo leh Hadii aydaan garanyn waxaan ka hadlayo, waxaad tihiin jaahiliin wacdiguna waxb idiinma tarayo. Maalin danbe ayay haddana ka codasdeen xikmadihiisa, inuu dadka u sheego.
Maalintaasina markii uu koray minbark ayuu weydiiyay ma garanysaan waxaan idinka kala hadlayo, waxayna ku jawaabeen haa. Ka dibna wuxu yidhi haddii aad garanaysaan waxaan ka hadlayo uma baahnidin khudbad.
Maalin danbe ayay haddana odoyaashii iyo dadkii tuulada ka codsadeen khudbadiisa. Maalinkan waxa uu weydiiyay “ Ma garanaysaan waxaan ka hadlayo “ kooxi waxay tidhi , haa halka koox kalen tidhi “Maya”. Ka dibna wuxu yidhi “ Kuwa garanayaa ha baraan ku aan garanayn. Ntaasi ka dibna wuu iskaga dhaqaaqay.